प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार गरेको सम्बोधन जनतालाई आशा जगाउनेभन्दा पनि निराशा बढाउने खालको भएको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउने काम मात्र भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा आशा जगाउनुको सट्टा झन निराशा थपेको टिप्पणी गरे ।
‘मलाई उत्साही बनाउन सक्नुभएन, भन्न त उहाँले भन्नुभयो हामी जीवनकालको कठिनाइमा छौं भनेर, यस्तो कठिनाइमा देशको अविभावकले जनतामा यो लडाईं लड्न सकिन्छ, जितिन्छ पार पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास सञ्चारित गर्नुपर्ने थियो त्यो सञ्चारित गर्न सक्नुभएन,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘सबैभन्दा दुःख पाएको मानिसलाई तपाईंहरूलाई दुःख हुन दिन्न भन्ने कुरा आश्वस्त गर्न सक्नु भएन । कैलाली कञ्चनपुरमा जुन असाध्यै त्राहीको स्थिति छ, त्यतातर्फ सरकार के गर्दैछ ? आश्वस्त पार्ने कुरा आएन । समग्रमा हामीलाई निराश बनाउनुभयो ।’
रिजालले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गर्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता नजनाउनु दुःखद् भएको बताए । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा उहाँकै वरिपरिबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा आम नागरिकलाई लागेपनि होइन, यसमा दोषीलाई कारवाही हुन्छ भनेर आश्वस्त गर्नसक्नु भएन’ रिजालले भने, ‘स्वास्थ्य उपकरण तत्कालै, चाँडै, छिट्टै ल्याउँछु, यो तयारी छ भन्ने कुरा पनि आश्वस्त पार्न सक्नुभएन, त्यसैले देशको मूल अभिभावक बोल्दा जनतामा आशा सञ्चारित हुन्छ, अलिकति भरोसा सञ्चारित हुन्छ भन्ने जुन चाहना थियो, त्यो पूरा भएन ।’
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको देखाउन खोज्नु सरकारलाई असफल देखाउन गरिएको प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजा भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीप्रति टिप्पणी गर्दै रिजालले भने, ‘त्यो चेतनाको समस्या हो, दुईतिहाइको र दर्शनको पनि समस्या हो, दुईतिहाइको संख्याको समस्या होला । अलिकति पनि आलोचना र टिप्पणी भयो भने कमी कमजोरी खोज्नेभन्दा आलोचना गर्नेमाथि आक्रमण गर्ने शैली छ । प्रधानमन्त्रीले जीवन र स्वतन्त्रतामध्ये एउटा रोज्नु पर्ने कुरा गर्नुभयो, यी सँगै जाने कुरा हुन् । उहाँले रोज्नुभएको बिम्ब नै ठीक छैन ।’
रिजालले ओलीमा अहिले पनि दुईतिहाइको दम्भ कायम रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो कठिनाइबाट दम्भबाट उहाँ अहिलेपनि मुक्त हुनुहुन्न, यतिका असफलताका बावजुद उहाँ यो दम्भबाट मुक्त भएको देखिएन । आशाभरोसा जाग्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति पहिलेको निराशा कायम रह्यो,’ उनले भने ।